Ike 3, 2009 site na rịọ 1 Ikwu
Ụbọchị atọ nanị mgbe version 0.1.4 anyị na-atọhapụ 0.1.5. Ihe kpatara nke a bụ na anyị na-emejuputa atumatu a obere (otú ahụ ka anyị adịghị mkpa retest ihe niile) ma na-akwanyere ùgwù mgbanwe (nke n'onye ezi omume a tọhapụ).
The mgbanwe mma ọgwụgwụ ọrụ arụmọrụ mgbe akpaaka translation na-eme, dị ka peeji mgbanwe eme ozugbo translation na tupu ayak na nchekwa data. Anyị nwere ike iji mejuputa mgbanwe a ngwa ngwa ekele na-eso progressbar mgbanwe a ole na ole na saịtị. Ndị na-eche banyere ihe ndị na agba pụtara – odo-enwe ọganihu dị ka akpaaka-nsụgharị na-natara na green-enwe ọganihu dị ka results na-mere na cached na nchekwa data.
Gị ntinye on a version ga-ekele (dị ka mgbe niile).
Gbara akwụkwọ N'okpuru: Hapụ ọkwa Akpado Na: obere, tọhapụ, WordPress ngwa mgbakwunye
Fernanda Gomez na-ekwu,
Ike 4, 2009 na 6:23 na
Nice plug in, but I tested with the zh-tw and it is not translating it correctly. Daalụ!